July 5, 2021 - Celegroup
မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံနေရပြီလားဆိုတာ ကိုယ်တိုင် အလွယ်တကူစမ်းသပ်သိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပါ…
July 5, 2021 cele group 0
ကိုဗစ္ရွိမရွိ စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ မိမိခႏၶာကိုယ္မွာ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံေနရၿပီလားဆိုတာ ကုိယ္တုိင္ အလြယ္တကူစမ္းသပ္သိနိုင္တဲ့ နည္းလမ္း အဖ်ားရွိၿပီး ေခ်ာင္းဆိုးလို႔ ေဆး႐ုံ ေရာက္သြားၿပီးမွဆိုရင္ အဆုတ္ရဲ့ 50% ကအမာရြတ္တြယ္ဆက္တစ္ရႉး ေတြ သိပ္သည္းထူေျပာ လာခ်ိန္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့တြက္ ေနာက္က်လြန္းေနပါၿပီ။ အသက္ျပင္းျပင္းရႉၿပီး 10 စကၠန္႔ ေအာင့္ထားပါ။အဲလို ေအာင့္ထား လို႔မွ ေခ်ာင္းမဆိုး ရင္မၾကပ္ မေမာပန္းပဲ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္နိုင္တယ္ဆိုရင္ အဆုတ္မွာ အမာရြတ္မရွိေနတဲ့တြက္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ မျဖစ္ေသးသလို ေရာဂါ ကူးစက္မခံ […]
မ်ိဳးဆက္သုံးဆက္ေလာက္ ဖိႏွိပ္ခံပီးေနလာခဲ့ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကို ျပတ္သားစြာ ေျပာခ်လိုက္တဲ့ မင္းေမာ္ကြန္း
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက အာဏာရ လူတစ္စု ဟာ ျပည္သူေတြ အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈၿပိဳကြဲေအာင္ အဘက္ ဘ က္ကေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေ သြးခြဲေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုလု ပ္ရ က္ေတြဟာ အခုမွလု ပ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေခတ္အ ဆက္ဆက္ သုံးလာခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းေ ဟာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘယ္လိုနည္းမ်ိဳးနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ေသြးခြဲေနပါေစ ျပည္သူေတြ အားလုံး သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေနထိုင္ၾကဖို႔ လိုေၾကာင္း […]
နတ်နက္ခတ်လူနက္ခတ်ဘီလူးနက္ခတ်တို့နှင့်အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးနည်း နတ်နက္ခတ်လူနက္ခတ်ဘီလူးနက္ခတ်တို့နှင့်အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးနည်း အလင်္ကာဖွားခါမတ်မတ်တည့်နက္ခတ်တည့်လတ်ပါကြကုန်သုံးခုဖြိုခွင်းထိုအကြွင်းမှတ်ခြင်းသညာပြတစ်ကို နတ်ဟူနှစ်မှာလူသုံးမူဘီးလူးရလူသားလူခြင်းထိန်းမြားလျှင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှလူနဲ့နတ်မှာလွန်ချမ်းသာကြည်စွာအေးမြမြဘီလူးနှင့်လူထိမ်းမြားမူအတူမေနရဘီလူးနှင့်နတ်ထိန်းမြား လတ်ကောင်းမြတ်ရန်မျိူးပနတ်အချင်းချင်းထိန်းမြားသော် ရာကျော်သက်ရှည်ကြဘီလူးအချင်းချင်းထိန်းမြားလျှင်သတင်းတေဇာကြွတွက်ချက်ပုံမှာမြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကို တည် ၃ဖြင့်စား၍၁ကြွင်းပါကနတ်နက္ခတ်၂ကြွင်းပါကလူနက္ခနတ်၃ကြွင်းပါကဘီလူးနက္ခတ်ဖြစ်သည်မှက်ချက်ဝကြွင်း၃ကြွင်းအတူပင်ဖြစ်၏ဥပမာမြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၆၀ခုနှစ်ဖွားသော ဇာတာရှင်အတွက်မွေးသက္ကရာဇ်၁၃၆၀ကိုတည်၍၃ဖြင့်စားပါကအကြွင်းမှာ၁ဖြစ်၍လူနတ်နက္ခတ်ဖွားဖြစ်သည်ဟုမှတ်ရပါမည်မွေးဖွားသောနက္ခတ်သဘောအရထိမ်းမြားလက်ထပ် ခြင်းပြုမည်ဆိုပါက၁။လူနက္ခတ်အချင်းချင်းထိမ်းမြားလက်ထပ်ပါကတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးလြန္စြာချစ်ခင်ကြင်နာကြ၍ချမ်းသာသုခရပါလိမ့်မည် ၂။လူနက္ခတ်နှင့်နတ်နက္ခတ်ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပါကကြွယ်ဝ ချမ်းသာသောစည်းစိမ်ကိုရ၍အသက်ရှည်စွာပေါင်းသင်းနေထိုင်ရလိမ့်မည် ၃။လူနက္ခတ်နှင့်ဘီလူးနက္ခတ်မွာထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းမပြုသင့်ပေထိမ်းမြားလက်ထပ်ပါကကွေကွင်းရခြင်းတစ်ယောက်တနယ်စီနေထိုင်ရခြင်းကျန်းမာရေးချို့တဲ့ခြင်းပူပင်သောက များ၍ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရခြင်းများကြုံတွေရလိမ့်မည်၄ဘီလူးနက္ခတ်နှင့်နတ်နက္ခတ်ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပါကရန်သူအမျိူးမျိုးကိုအနိုင်ရရှိခြင်းဂုဏ်သတင်းအရှိန်အဝါကျော်ဇော ၍ချမ်းသာစွာနေရခြင်းနေနှင့်လရွှေနှင့်မြပမာတင့်တယ်စွာနေရပါလိမ့်မည်၅။နတ်နက္ခတ်အချင်းချင်းထိမ်းမြားလက်ထပ်ပါကအနာရောဂါကင်းဝေး၍ကျန်းမာစွာနေရခြင်းအသက်ရာ ကျော်ရှည်၍အေးချမ်းသာယာစွာနေထိုင်ရခြင်းတို့ကိုရရှိခံစားရပါလိမ်မည်၆။ဘီးလူးနက္ခတ်အချင်းချင်းထိမ်းမြားလက်ထက်ပါကရန်အပေါင်းတို့ကိုအနိုင်ရရှိခြင်းဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောခြင်းကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းတို့ကိုရရှိခံစားရပါလိမ့်မည် Credit Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ နတ္နကၡတ္လူနကၡတ္ဘီလူးနကၡတ္တို႔ႏွင့္အိမ္ေထာင္ဘက္ ေ႐ြးနည္း နတ္နကၡတ္လူနကၡတ္ဘီလူးနကၡတ္တို႔ႏွင့္အိမ္ေထာင္ဘက္ ေ႐ြးနည္း အလကၤာဖြားခါမတ္မတ္တည့္နကၡတ္တည့္လတ္ပါၾကကုန္သုံးခုၿဖိဳခြင္းထိုအႂကြင္းမွတ္ျခင္းသညာျပတစ္ကို နတ္ဟူႏွစ္မွာလူသုံးမူဘီးလူးရလူသားလူျခင္းထိန္းျမားလွ်င္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွ်လူနဲ႔နတ္မွာလြန္ခ်မ္းသာၾကည္စြာေအးျမျမဘီလူးႏွင့္လူထိမ္းျမားမူအတူေမနရဘီလူးႏွင့္နတ္ထိန္းျမား လတ္ေကာင္းျမတ္ရန္မ်ိဴးပနတ္အခ်င္းခ်င္းထိန္းျမားေသာ္ ရာေက်ာ္သက္ရွည္ၾကဘီလူးအခ်င္းခ်င္းထိန္းျမားလွ်င္သတင္းေတဇာႂကြတြက္ခ်က္ပုံမွာျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို တည္ ၃ျဖင့္စား၍၁ႂကြင္းပါကနတ္နကၡတ္၂ႂကြင္းပါကလူနကၡနတ္၃ႂကြင္းပါကဘီလူးနကၡတ္ျဖစ္သည္မွက္ခ်က္ဝႂကြင္း၃ႂကြင္းအတူပင္ျဖစ္၏ဥပမာျမန္မာသကၠရာဇ္၁၃၆၀ခုႏွစ္ဖြားေသာ ဇာတာရွင္အတြက္ေမြးသကၠရာဇ္၁၃၆၀ကိုတည္၍၃ျဖင့္စားပါကအႂကြင္းမွာ၁ျဖစ္၍လူနတ္နကၡတ္ဖြားျဖစ္သည္ဟုမွတ္ရပါမည္ေမြးဖြားေသာနကၡတ္သေဘာအရထိမ္းျမားလက္ထပ္ ျခင္းျပဳမည္ဆိုပါက၁။လူနကၡတ္အခ်င္းခ်င္းထိမ္းျမားလက္ထပ္ပါကတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၾလျႏၥာခ်စ္ခင္ၾကင္နာၾက၍ခ်မ္းသာသုခရပါလိမ့္မည္ […]
ကိုကို လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေး နဲ့၊ မောင် လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေး ဘာတွေကွာခြားသလဲ
ကိုကို လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေး နဲ့၊ မောင် လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေး ဘာတွေကွာခြားသလဲ ကိုကို လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေး နဲ့ မောင် လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးကြားက ခြားနားချက်များ မိန်းကလေး တွေ ချစ်သူ ကောင်လေး ကို ခေါ်ဝေါ်ပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ အချစ် စိတ်နေသဘောထားကို အကြမ်းဖျင်း အားဖြင့် သိနိုင် ပါတယ်။ ကဲ ကိုယ့် ကောင်မလေး က ဘယ်လိုလဲ […]
နဖူးပြောင်သူတွေရဲ့ သူများနဲ့မတူဘဲ ကွဲပြားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အားသာချက်တွေ . . .
(၁) ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်တယ် သူတို့တွေဟာ တခြားသူတွေကို မှီခိုတာထက် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်ပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်ကြတဲ့သူလေးတွေဖြစ်ပါတယ် အခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်တိုင်ကြိတ်ဖြေရှင်းနေတတ်ပြီး တခြားလူတွေကိုအကူအညီတောင်းဖို့ ဝန်လေးတတ်တဲ့သူတွေပါ (၂) လွယ်လွယ်နဲ့မပြိုလဲတတ်ဘူး တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် မရရအောင်လုပ်တတ်တယ် ဘယ်လိုအတိုက်အခိုက်မျိုးတွေနဲ့ပဲကြုံရပါစေ လွယ်လွယ်နဲ့ပြိုလဲမသွားဘဲ ကြံ့ကြံံ့ခံနိုင်တဲ့၊ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့သူလေးတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ် (၃) ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်တာကိုမုန်းတယ် လွတ်လပ်တာကိုကြိုက်တယ်၊ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်၊ ကိုယ့်ကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်တာမျိုးကို လုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့သူတွေပေါ့ (၄) တော်တဲ့သူတွေ နဖူးကျယ်တဲ့သူတွေရဲ့ cranial cavity ပိုကြီးတာကြောင့် ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှု […]
(၇) ရက္သားသမီးမ်ား က်န္းမာေဘးကင္းေစဖို႔ ရည္စူးၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ဆြမ္းခ်ိဳင့္ႏွင့္ဝတၳဳေငြကပ္လႉကာ ဆုေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ ေက်ာ္ေက်ာ္နႏၵ
ေက်ာ္ေက်ာ္နႏၵကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲႀကီးမွာ လမ္းေပၚထြက္လႈပ္ရွားမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ပါဝင္အားျဖည့္ခဲ့သူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အင္တိုက္အားတိုက္ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာ္ေက်ာ္နႏၵကေတာ့ ၅၀၅ က ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူခံထားရေပမယ့္ အခုေတာ့ အမႈ႐ုပ္သိမ္းေပးတဲ့ အထဲမွာ ပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ အားလုံးက ဝမ္းသာေနၾကတာပါ ။ ေရွာင္တိမ္းေနရခ်ိန္ေတြမွာ လည္း သူ႔အေနနဲ႔ အခက္အခဲေတြ အဆင္မေျပမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာပါ ။ အခုေတာ့ အမႈက ႐ုပ္သိမ္းခံရတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ […]
အမေနဲ့သား နောက်ဆုံးအတူတွဲရိုက်ခဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတဲ့ ဒီပုံလေးရိုက်ပြီးနောက်တော့…
အမေနဲ့သား နောက်ဆုံးအတူတွဲရိုက်ခဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတဲ့ ဒီပုံလေးရိုက်ပြီးနောက်တော့… အမေနဲ့သား နောက်ဆုံးအတူတွဲရိုက်ခဲ့ဓာတ်ပုံလေးတဲ့ဒီပုံလေးရိုက်ပြီး အမေနဲ့သား နောက်ဆုံးအတူတွဲရိုက်ခဲ့ဓာတ်ပုံလေးတဲ့ဒီပုံလေးရိုက်ပြီးမကြာခင်မှာ အပြီးခွဲခွာရလိမ့်မယ်လို့ သားအမိနှစ်ယောက်လုံးဘယ်သူကတွေးခဲ့မှာလဲ သားဖြစ်သူနဲ့ နောက်ဆုံးရိုက်ဖြစ်တဲ့ပုံလေးတင်ရင်း နောက်ဆုံးအမှတ်တရပြောပြလာတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူခင်မြတ်မွန် သားအမိ နှစ်ယောက်နောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးပါ (5.4.21)ညနေကားနဲ့ မြဝတီတက်တော့ အဝေးပြေးကားဂိတ်ကိုလိုက်ပို့ဖြစ်တယ် မေကြီးစိတ်မပူနဲ့ ကျနော်ကအပီအပြင် ရုပ်ဖျက်ထားတာ.ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့. မအေကတော့ခွဲရလို့လွမ်းတာရော.ဘေးရန်အတွက်စိတ်ပူတာရောသူကတော့အေး ဆေး ဘဲ.ပြုံးလို့.. idiots အေမနဲ႔သား ေနာက္ဆုံးအတူတြဲရိုက္ခဲ့ ဓာတ္ပုံေလးတဲ့ ဒီပုံေလးရိုက္ၿပီးေနာက္ေတာ့… အေမနဲ႔သား ေနာက္ဆုံးအတူတြဲရိုက္ခဲ့ဓာတ္ပုံေလးတဲ့ဒီပုံေလးရိုက္ၿပီး အေမနဲ႔သား ေနာက္ဆုံးအတူတြဲရိုက္ခဲ့ဓာတ္ပုံေလးတဲ့ဒီပုံေလးရိုက္ၿပီးမၾကာခင္မွာ အၿပီးခြဲခြာရလိမ့္မယ္လို႔ […]
ပါရာစီတမောလ် သောက်ရင် သတိထားရမည့်အချက်လေးများ
ပါရာစီတမောလ် သောက်ရင် သတိထားရမည့်အချက်လေးများ ပါရာစီတမောလ် သောက်ရင် လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်များ ပါရာစီတမောလ်ကို အမြဲသောက်သုံးလေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သိထားသင့်တာကတော့ ညွှန်ကြားထားတဲ့ ပမာဏထက် ကျော်လွန်ပြီး မသောက်သုံးရဘူးဆိုတာပါပဲ။ သာမန်အားဖြင့် ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ ပါရာစီတမောလ်တစ်လုံးမှာ ၅ဝဝ မီလီဂရမ် ရှိပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက်အတွက် အများဆုံး ပမာဏဟာ တစ်ခါသောက်လျှင် ၁ဝဝဝ မီလီဂရမ် (၂ – လုံး)ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တာလုံးအတွက် အများဆုံးသောက်သုံးနိုင်တဲ့ ပမာဏကတော့ စုစုပေါင်း ၄၀၀၀ မီလီဂရမ် […]
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဇာတာအရ ရှေ့လျှောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကို အတိအကျဟောကိန်းထုတ်လိုက်တဲ့ ဆရာမတစ်ဦး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဇာတာအရ ရှေ့လျှောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကို အတိအကျဟောကိန်းထုတ်လိုက်တဲ့ ဆရာမတစ်ဦး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဇာတာကိုတွက်ချက်ပြီး ရှေ့လျှောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကို အတိအကျဟောကိန်းထုတ်လိုက်တဲ့ ဆရာမတစ်ဦး နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ယခုလက်ရှိမှာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ(၁၉)ရက်နေ့ကပဲ အသက် (၇၆)နှစ်ပြည့်သွားခဲ့တဲ့ အမေစုက အရင်နှစ်တွေကလို ပြည်သူတွေနဲ့အတူ မရှိနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ပြည်သူ့မေတ္တာကို ရရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း မေတ္တာဖြင့် အခမဲ့ဗေဒင်ဟောပေးနေတဲ့ ဆရာမတစ်ဦးက အမေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဟောကိန်းထုတ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆရာမရဲ့ဟောကိန်းကို ပြည်သူတွေက အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေကြပြီး […]
အဖြူရောင်ကိုကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေမှာရှိနေတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားများ အဖြူရောင်ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေမှာရှိနေတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားများအင်းကျီကိုဝယ်မယ်စိတ်ကူးလိုက်တိုင်းအဖြူရောင်ကိုပဲမ်က္စိအျမဲကျနေတတ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဖြူရောင်တွေကိုတမင်ရွေးတာတော့မဟုတ်ပေမယ့်လည်းအဖြူရောင်ကိုမှကြည့်အကောင်းဆုံးနဲ့သဘောအကျဆုံးဖြစ်နေတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အဝတ်တွေမှာအဖြူတွေကပိုပြီးများနေလေ့ရှိပါတယ်ဒီလိုအဖြူကိုမှတျခားအရောင်တွေထက်ပိုကြိုက်လေ့ရွိတဲ့ကောင်မလေးတွေမှာဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားတွေရှိနေတတ်ပါတယ် (၁)စိတ်ရိုးရှင်းတယ်စိတ်ပညာအရအဖြူရောင်ကရိုးရှင်းမှု၊အပြစ်ကင်းစင်မှုနဲ့ပြီးပြည့်စုံမှုစတာတွေကိုကိုယ်စားပြုထားပါတယ်အဖြူရောင် ကြိုက်သူအများစုကလည်း ရိုးရှင်းမှုကိုနှစ်သက်ပြီးစိတ်ထားကြည်လင်ကြပါတယ်သူတို့တွေကသူများအပေါ်ဒုက္ခဖြစ်စေအောင်လည်းမလုပ်တတ်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဘဝကိုမလိုချင်ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ (၂]အသန့်ကြိုက်တယ်အဖြူရောင်ဆိုဖြူစင်ပြီးသန့်ရှင်းမှုကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်ဒါကြောင့်အသန့်ကြိုက်သူတွေရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်တွေမနှစ်သက်သူတွေကအဖြူရောင်ကိုသဘောကျတတ်ကြပါတယ်အရေးကြီးကိစ္စရပ်တွေအတွက်အဖြူရောင်ဒီဇိုင်းတွေကိုပိုပြီးရွေးချယ်မိတတ်ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပြီးသန့်ပြန့်နေတာကိုမှစိတ်ကျေနပ်ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ (၃) ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်ပျော်နေတတ်သူတွေ ကလည်း အဖြူရောင်ကို နှစ်သက်ကြပါတယ်အဖြူရောင်မှာကိုကဖြူစင်ခြင်း၊ရိုးရှင်းစွာပျော်ရွှင်ခြင်းကိုကိုယ်စားပြုနေတာမို့ပျော်တတ်သူတွေကအဖြူရောင်ကိုကြိုက်မိတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကတစ်ဖက်သားကိုလည်းနွေးထွေးမှုနဲ့လုံခြုံမှုကိုခံစားရစေပါသေးတယ်တစ်ချို့တွေကတော့သူတို့အဖြူရောင်ဝတ္ထားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကြည်လင်ပျော်ရွှင်နေပေမယ့်အနားကသူတွေက စိတ်ကြည်လင်နေမှန်း မသိတာမျိုးကိုလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ပျော်နေတတ်တာသူတို့ပါပဲ (၄]တက်ကြွတယ်သွက်လက်တဲ့နေရာမှာအဖြူရောင်ကိုကြိုက်သူတွေကထိပ်ဆုံးပါပဲသူတို့တွေကတော့အတွေးတွေလည်းကောင်းသလိုသွက်လက်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖျတ်လတ်ပြီးလန်းဆန်းနေတတ်သလိုအဲ့လိုနေရတာကိုသဘောအကျဆုံးဖြစ်ကြပါတယ်လန်းဆန်းပြီးပေါ့ပါးနေတာကြောင့်အနားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုပါသူတို့ကစိတ်ပျော်ရွှင်စေတတ်ပါတယ်။ (၅]ကြင်နာတယ်သူတို့တွေကအပြောထက်နားထောင်တာကိုပိုအလုပ်ပေးတတ်ကြပါတယ်သူတို့ကိုရင်ဖွင့်တာမျိုးကိုနားထောင်ပေးတတ်သလိုကြင်နာတတ်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိတာကြောင့်ပြဿနာတွေဖြစ်လာရင်တောင်စိတ်အေးအေးထားတွေးတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှည်သည်းခံမှုလည်းရှိတာကြောင့်သူတို့မှာတော့ပူလောင်မှုတွေပြည့်နေတဲ့ပုံစံကိုမတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ crd Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ အျဖဴေရာင္ကိုႀကိဳက္တဲ့ ေကာင္မေလးေတြမွာရွိေနတဲ့စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား အျဖဴေရာင္ကိုႀကိဳက္တဲ့ေကာင္မေလးေတြမွာရွိေနတဲ့စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားအင္းက်ီကိုဝယ္မယ္စိတ္ကူးလိုက္တိုင္းအျဖဴေရာင္ကိုပဲမ္ကၥိအ်မဲက်ေနတတ္တဲ့သူေတြရွိပါတယ္အျဖဴေရာင္ေတြကိုတမင္ေ႐ြးတာေတာ့မဟုတ္ေပမယ့္လည္းအျဖဴေရာင္ကိုမွၾကည့္အေကာင္းဆုံးနဲ႔သေဘာအက်ဆုံးျဖစ္ေနတာေၾကာင့္သူတို႔ရဲ႕အဝတ္ေတြမွာအျဖဴေတြကပိုၿပီးမ်ားေနေလ့ရွိပါတယ္ဒီလိုအျဖဴကိုမွတ်ခားအေရာင္ေတြထက္ပိုႀကိဳက္ေလ့႐ြိတဲ့ေကာင္မေလးေတြမွာဒီလိုစိတ္ေနစိတ္ထားေတြရွိေနတတ္ပါတယ္ (၁)စိတ္႐ိုးရွင္းတယ္စိတ္ပညာအရအျဖဴေရာင္က႐ိုးရွင္းမႈ၊အျပစ္ကင္းစင္မႈနဲ႔ၿပီးျပည့္စုံမႈစတာေတြကိုကိုယ္စားျပဳထားပါတယ္အျဖဴေရာင္ ႀကိဳက္သူအမ်ားစုကလည္း ႐ိုးရွင္းမႈကိုႏွစ္သက္ၿပီးစိတ္ထားၾကည္လင္ၾကပါတယ္သူတို႔ေတြကသူမ်ားအေပၚဒုကၡျဖစ္ေစေအာင္လည္းမလုပ္တတ္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္ရႈပ္ေထြးေနတဲ့ဘဝကိုမလိုခ်င္ၾကသူေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ (၂]အသန႔္ႀကိဳက္တယ္အျဖဴေရာင္ဆိုျဖဴစင္ၿပီးသန႔္ရွင္းမႈကိုကိုယ္စားျပဳပါတယ္ဒါေၾကာင့္အသန႔္ႀကိဳက္သူေတြရႈပ္ရႈပ္ယွက္ယွက္ေတြမႏွစ္သက္သူေတြကအျဖဴေရာင္ကိုသေဘာက်တတ္ၾကပါတယ္အေရးႀကီးကိစၥရပ္ေတြအတြက္အျဖဴေရာင္ဒီဇိုင္းေတြကိုပိုၿပီးေ႐ြးခ်ယ္မိတတ္ၾကသူေတြလည္းျဖစ္ၿပီးသန႔္ျပန႔္ေနတာကိုမွစိတ္ေက်နပ္ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ (၃) ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တယ္ေပ်ာ္ေနတတ္သူေတြ ကလည္း အျဖဴေရာင္ကို ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္အျဖဴေရာင္မွာကိုကျဖဴစင္ျခင္း၊႐ိုးရွင္းစြာေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းကိုကိုယ္စားျပဳေနတာမို႔ေပ်ာ္တတ္သူေတြကအျဖဴေရာင္ကိုႀကိဳက္မိတာျဖစ္ပါတယ္သူတို႔ေတြကတစ္ဖက္သားကိုလည္းေႏြးေထြးမႈနဲ႔လုံၿခဳံမႈကိုခံစားရေစပါေသးတယ္တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့သူတို႔အျဖဴေရာင္ဝတၳားတဲ့အခ်ိန္မွာစိတ္ၾကည္လင္ေပ်ာ္႐ႊင္ေနေပမယ့္အနားကသူေတြက စိတ္ၾကည္လင္ေနမွန္း […]
ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက် (၅)ချက်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရင် သင့်တို့ရဲ့မိသားစုက သီရိဂေဟာလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီ လူတိုင်းက ပျော်ရွှင်နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုဘဝကို လိုချင်ကြသူတွေချည်းပါပဲ။ မိဘတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်သားသမီးအတွက် စိတ်လုံခြုံမှုကို ပေးချင်ကြပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ မိသားစုဘဝကို သက်ရောက်မှုတွေက အကောင်းဘက်ကထက် အဆိုးဘက်ကနေသာ ပိုများလာပါတယ်။ ဒါဆို အိမ်ထောင်ကို ဦးစီးနေကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက် ပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့ မိသားစုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) အိမ်ပြန်လာသူကို ကြိုဆိုရာဝယ် ခင်ပွန်းပြန်လာတာကို ဇနီးက ဆီးကြိုတာဖြစ်စေ၊ ဇနီးပြန်လာတာကို ခင်ပွန်းက […]
ဒီလိုသားသမီးမ်ိဳးေတြက ဘယ္ေသာအခါမွ ႀကီးပြားမွာမဟုတ္ဘူး
ဒီလိုသားသမီးမျိုးတွေက ဘယ်သောအခါမှ ကြီးပွားမှာမဟုတ်ဘူး (၁)မိဘကို အိမ်စောင့်ထားခြင်း။ (၂)မိဘကအဝတ်လျှော်ဖွတ်ပေးရခြင်း။ (၃)မိဘက သား သမီးပြန်လာလျှင်ခြံတံခါး ဖွင့်ပေးရခြင်း။ (၄)မိဘကိုသား သမီး ထိန်းခိုင်းခြင်း။ (၅)မိဘကထမင်းချက်ပြုတ် ကျွေးမွေးရခြင်း။ (၆)မိဘကိုလစာပေးသလိုမျိုး ငွေပေးခြင်း။ (၇)မိဘအမှားပြုလျှင်လူရှေ့သူရှေ့ ဆူပူအပြစ်တင်ခြင်း။ (၈) မိဘက ဘုရားရှိခိုးလျှင်ကျယ်ခြင်း တိုးခြင်းကို ကဲ့ရဲ့ခြင်း။ (၉)မိဘကိုမောင်နှမလို သဘောထား ဆက်ဆံခြင်း။ (၁ဝ)မိဘကိုနှမျောတွန့်တို ပေးကမ်းခြင်း။ (၁၁)မိဘစကားကို ပစ်ပယ်ခြင်း။အလေးမထားခြင်း။ ဒါမျိုးတွေကို ရှောင်ရှားကြပါ၊ ဆင်ခြင်ကြပါ၊ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့။မိဘဆိုတာအစားထိုး […]